Lufthansa inoendesa maAirbus A321 maviri anoshandurwa zvachose kuva vanotakura zvinhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Lufthansa inoendesa maAirbus A321 maviri anoshandurwa zvachose kuva vanotakura zvinhu
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege idzi dzichashandiswa neLufthansa CityLine pachinzvimbo cheLufthansa Cargo uye dzichamira muFrankfurt.
Ndege dzepakati-dhonza dzinoshandiswa sendege-dzega nendege munzira dzemakondinendi muEurope.
Ndege dzinogashira mikova yekutakura zvinhu kuitira kuti midziyo itakurwe pachigaro chikuru zvakare.
Ndege dzinofambisa ndege dzichashandiswa neLufthansa CityLine.
Lufthansa Cargo iri kuisa mari mukuwedzera kweayo masimba emitoro. Kubva kutanga kwa2022, kambani ichapa vatengi vayo kuwedzera chinzvimbo muEurope nekushandura zvachose Airbus Ndege dzinokwira mazana matatu nemakumi matatu nevaviri vanoenda kunotora zvinhu. Nechinangwa ichi, mapatya-injini epakati-anotakura ndege achagamuchira madhoo makuru ekutakura zvinhu kuti akwanise kutakura midziyo pachigaro chikuru zvakare. Pakutanga, kushandurwa kwendege mbiri dzeAirbus kwakarongwa. Ndege idzi dzichashandiswa neLufthansa CityLine pachinzvimbo cheLufthansa Cargo. Vachave vakamira muFrankfurt.
Kukura kwekuyambuka muganhu eCommerce kutakura kunofungidzirwa kutenderedza 20% pagore kwemakore mashanu anotevera. Vatengi vanotarisira kugara vakapfupika nguva dzekutakura dzezvinhu zvavo zvakarairwa. Izvi zviri kuwedzerawo kudiwa kwekubatanidza kutakura nendege mukati meEurope.
“Lufthansa Cargo inoda kupa vatengi muchikamu cheCommerce nekukurumidza kubatana kwepakati peEuropean. NeA321s akachinjwa, tiri kusangana nevatengi vedu vari kudiwa zvekugadzirisa zuva rimwe chete nekuwedzera kusimbisa dense network yekubatana pamwe nezvatinopa, ”akadaro Dorothea von Boxberg, CEO weLufthansa Cargo. "Mhando yendege yakasarudzwa inogona kutakura 28t pakufamba, huwandu hukuru hwekutakura zvinhu kupfuura mudumbu revatambi venguva pfupi. Pamusoro pevanoendesa mberi, vanobatanidza uye vanoshanda neposvo, vanopa eCommerce vanozove vatengi nezvechipo ichi, "von Boxberg akawedzera.
“Iine makore anodarika makumi matanhatu ane ruzivo mukutakura nendege kuEurope, Lufthansa CityLine inomirira mashandiro akavimbika uye anoshanda semubatsiri anokosha muLufthansa Group. Kugadzikana mukuita uye nekukurumidza mukuziva nekushandisa mikana mitsva ndiyo hwaro hwebhizinesi redu. Tinoda kushandisa hunhu uhwu kushandira Lufthansa Cargo nevatengi vayo, ”anodaro Steffen Harbarth, Managing Director weLufthansa CityLine.
Iyo Airbus A321s (A321P2F) inoshandurwa kuva vanotakura zvinhu vanopa mubhadharo wematani makumi maviri nemasere ane huwandu hwemakiromita mazana matatu nemazana mashanu. Iko kushandurwa kunobvumidza kushandiswa kweyakaenzana cargo pallets pane huru dhikiki futi. Iyo mapatya-injini Airbus A28 ndeimwe yendege dzakasiyana-siyana mukirasi yayo uye inogonesa mashandiro epasirose.
Kuputika kwechipiri kwakataurwa paKabul airport mushure megumi nematatu ...
Passenger yemunhu data rakabiwa muBangkok Airways ...
Zvemotokari chiutsi masisitimu emusika anosvika $ 68.45 ...
Kenya yakagadzirira senzvimbo nyowani yeUNWTO General ...